देशमै पहिलो पटक किसान पदमा जागिर खुल्यो - Kantipath.com
सायद नेपालमै पहिलाे पटक किसान पदकाे लागी आबेदन माग भएकाे छ । बतास एग्रो प्रालिले किसान पदमा रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका २ भयर चौरमा २०० रोपनी क्षेत्रफलमा गर्न लागिएको कृषी र पशुपालनका लागि १० परिवार अर्थात (श्रीमान/श्रीमती) का लागि रोजगारी आह्वान गरिएको हो ।
Previous Previous post: चर्चित बलिउड अभिनेता आमिर खानको डिभोर्स
Next Next post: होटल समिटमा एमाले मिलाउने वार्ता जारी
कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेता खनाल अस्पताल भर्ना
‘थाहा’ के हो ? रुपचन्द्र विष्टलाई कसरी बुझ्ने ?
७ बर्षसम्म बहिनीमाथि बलात्कार गर्ने डाक्टरविरूद्ध मुद्दा दर्ता